रोचक Archives - Page 17 of 18 - Nayabulanda.com
अनौठो संस्कार, जहाँ अर्काकी श्रीमती चोर्न वर्षेनी मेला लाग्छ
दुनियाँका केही वैवाहिक संस्कारहरु निकै अनौठा तथा झ्वाट्ट सुन्दैमा नपच्ने खालका लाग्छन् । पश्चिमी अफ्रिकाको एक आदिवासी समुदायमा प्रचलित विवाह संस्कार पनि निकै हैरान गराउन खालको छ । बोदाब्बे आदिवासी समुदायमा प्रचलित उक्त संस्कार अन्तरगत पुरुषहरु एक अर्काका श्रीमतीहरु चोरेर बिहे गर्दछन् । यस्तो चोरी बिहे उक्त आदिवासी समु...
एजेन्सी : अहिलेको युगमा विज्ञानले निकै सफलता हात पारिसकेको छ । यद्यपी, विज्ञानको अहिले पनि केही यस्ता सीमा छन्, कुनै कुरा यस्ता छन् जो विज्ञानको परिधिबाट आज पनि निकै टाढा छन् । केहि दिन अघि बेलायतको हाई स्कूलमा पढ्ने एक किशोरी १२ वर्षको उमेरमा आमा बनिन् भन्ने समाचार आयो । हुन त उनलाई बेलायतमा सबैभन्दा कम उमेरमा आमा ब...
भारतको राजस्थानस्थित मारवाडमा एउटा अनौठो उत्सव मनाइन्छ । धींगा गवर भनिने उक्त उत्सवमा निकै अनौठो परम्परा निर्वाह गरिन्छ । जसमा अविवाहित युवतीहरुले अविवाहित युवकहरुलाई लखेटी लखेटी लठ्ठीले कुट्छन् । यसरी लठ्ठीले कुटिने युवकको बिहे पक्का हुन्छ । गवर मातालाई गाउँलेहरुले पार्वतीको रुपमा पूजा गर्दछन् । उक्त परम्परामा अविवाह...
निन्द्रामा किन देखिन्छ यौन सपना ?
एजेन्सी : निदाइरहेको बेलामा एकपछि अर्को विचार, भावना र संवेदना अचेतनरूपमै मस्तिष्कमा आउनु सपना देख्नु हो । मानव इतिहासमा धेरै प्रयास भए पनि व्यक्तिले किन कुनै किसिमको सपना देख्छ र त्यसको अर्थ के हुन्छ, राम्ररी बुझ्न सकिएको छैन । सपना विभिन्न किसिमका डरलाग्दो, साहसिक, रमाइलो तथा यौनसम्बन्धी हुन्छन् । सामान्यतया प्रजनन...
वर्षौँ सम्म पनि कुहिएको छैन युवतीको लास, चिहानबाट आइरहेको छ सुगन्ध !
भूत प्रेत तथा आत्मा तथा भगवानहरुको विषयमा समाजमा सदैव मतभेद रहँदै आएको छ । कतिले भूत हुन्छ भन्छन् त कतिले भुतको कुरालाई सिधै नकार्छन् । तर कहिलेकाहीँ यस्ता घटनाहरु घट्छन् जसबाट स्विकार्न बाध्य भइन्छ की प्रकृतिमा केही न केही यस्तो अलौकिक शक्ति चाहीँ छ । अफ्रिकी देश यमनमा पनि यस्तै घटना भयो जसका कारण त्यहाँका मानिसहरु आश...
अब बिरालोको काम केवल मुसा मार्नेमै मात्र सिमित छैन । यो दुनियामा बिरालोले पनि सरकारी जागिर खाँदैछ । एकातिर डिग्री पास गरेका मानिसहरु समेत बेरोजगार भएर हल्लिरहनुपरेको छ भने अर्कोतिर बिरालोले समेत सरकारी जागिर पाउने भएको छ । बिरालोकै कारण मानिसले जागिर गुमाउने स्थिति पनि आइलागेको छ । तर चिन्ता नगर्नुस् बिरालोले सरकारी नो...
बारम्बार वीर्य फाल्ने पुरुषलाई प्रोटेस्ट क्यान्सरको सम्भावना न्यून हुने एक अमेरिकी अध्यनले देखाएको छ । बढी वीर्य नाश गर्दा स्वास्थ्यमा कस्तो अशर गर्छ भन्ने विषयमा सर्वत्र बहस चलिरहेकै बेला अनुसन्धानकर्ताले यो निस्कर्ष निकालेका हुन् । १८ वर्ष लामो यस अध्ययनमा ३२ हजार पुरुषलाई सहभागी गराइएको थियो । सन् १९८२ देखि २०१०...
विश्वकै पहिलो रोबोट वकिलले जागिर पायो
अमेरीका : वकिलको काम गर्ने विश्वकै पहिलो रोबोटले अन्ततः जागिर पाएको छ । अमेरिकाको एक र्फमले उक्त रोबोट वकिललाई नोकरीमा राखेको हो । यो वकिल रोबोटले अब कानूनी अनुसन्धानमा कम्पनीका अन्य विभिन्न टोलीहरुलाई सहयोग गर्नेछ । ‘रोस’ नामको उक्त रोबोट वकिललाई आइबिएम कम्पनीले तयार गरेको हो । कग्निटिभ कम्प्युटिंग तथा प्राकृतिक भा...
४० वर्षसम्म घरभित्र १८६ सर्प, कसैलाई थाहै भएन
लखिमपुर : सुन्दैमा डरलाग्दो । मान्छे बस्ने घरभित्र १ सय ८६ वटा सर्प बसिरहेका छन्, त्यो पनि ४० वर्षदेखि । तर घरमा बस्ने मानिसहरुलाई सर्पको बथान घरभित्रै बसिरहेको सुइको पनि छैन । यो घटना हो भारतको उत्तरप्रदेशस्थित लखीमपूरको । लखिमपुर खिरीको ओयल गाउँमा एक घरबाट हालै १ सय ८६ सर्प निस्किएका छन् । स्थानीय जितेन्द्र मिश्रा...